မောင်ဖုန်းမြင့်: 3/1/08 - 4/1/08
ဘလောက် နာအတွက် ဆန္ဒခံယူပွဲ
ကုရာနတ္တိ ၊ ဆေးမရှိတည်း
မှတ်ကြ ဘလော.ဂါ အကျိုး တည်း.......။
အော်..မောင်ဖုန်း ...မောင်ဖုန်း..လူကိုကြည်.တော. ဘာကောင်မှမဟုတ် ကွန်ပျုတာလေး ချောက်တီး ချောက်ချက်နှိပ်တက်ရုံ၊ယင်းဂလိပ်စာကိုခွေးအလှည်းကျိုးနင်းသလိုဖတ်တတ်ရုံလေးနှင်.မိမိကိုယ်ကိုယ် အထင်ကြီးကာ
ဘလော. တစ်ခုပြုလုပ် ဖန်တီးလေ၏။
အနှီ မောင်ဖုန်းဆိုသည်. ဂယောင်သည် ဘလော.တစ်ခု ဖန်တီးပြီး သည်.အချိန်မှ စ၍ သူကိုယ်သူ စီတီဇင် ဂျာနယ်လစ် ဟု သွေးနထင်ရောက်ကာ နေရာတကာ စပ်စပ်နှင်. အကုန်ဝင်ပါလေ ၏ ။ လမ်းထိပ် အမှိုက်ပုံက
ခွေးနှစ်ကောင် ကိုက်သည်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ကာ ပို.စ် တင်မည် လုပ်စဉ်ခွေးများမျက်စိ နောက်ကာ ၎င်းအားလိုက်
ကိုက် ကြသောကြောင်.ဖနောင်.နှင်. တင်ပါး တစ်သားတည်းကျအောင် ထွက်ပြေးခဲ.ဘူးလေသည်..။
ဒင်း၏ဘလော.ခေါင်းစီးကိုလည်း မတန်မရာ လွမ်းရိပ်မြုံ ဟုကင်ပွန်းတပ်ကာမြန်မာပြည်မှာ ကျန်ရစ်သူ ရည်းစား
နှင်.အကြွေးများ ၊ဆွေးမြေ.ပျက်စီးသွားသော ကွက်ပျစ်များကို အကြောင်းပြုကာစာတိုပေစ များရေးဖွဲ.၍ ဘလော.ဖတ်သူခုနှစ်ရက် သားသမီး အပေါင်းတို.ကိုမျက်စိ ဒုက္ခပေးခြင်း ၊စိတ်ဒုက္ခပေး ခြင်းတို.ကို အကြိမ်ကြိမ်
ထိုကဲ.သို.သော သူကောင်.သားက ဘလော.စစလုပ်ပီး တစ်ပတ်ခန်.အထိ ဖနောင်.သံစူးထားသလို လမ်းလျှောက်လျှင် ကြွစောင်းစောင်း ဖြစ်နေသောကြောင်.အလုပ်ရှင်ကပင် ဒီကောင်ကို အခုတစ်လောကြည်.ရ
တာ အချိုးကို မပြေဘူးဟု မှတ်ချက်ပေးခြင်းခံရလေသည် ။
ဒါလောက်နှင်.တော.ဒင်းက မမှတ်၊ မနက်ခင်း ရုံး ခန်းဖွင်.ပြီး သည်နှင်. လခပေးထားသော အလုပ်ကို အရင်
မလုပ် ကွန်ပျုတာရှေ.ထိုင်၍အလုပ်ရှုပ်ချင်ယောင်ဆောင်ကာ မီးလျှံမြေခွေး ကိုအဖော်လုပ် ပြီး ဘလော.တကာ
လှည်.တော်ကီ ပွားလေ ၏ ။
သိသိမသိသိ အလှုအိမ် ဆိုရင်ဝင်စားလို. ရတာပဲဟူသော မျက်နာပေး ဖြင်.စီဗောက်တကာတွင်အရှက်မဲ. စွာ ဝင်
ရေးတတ်သေးသည်။“ဟေ.မင်းတို.အလှု ငါလာတယ်နော် ငါ.ဘကြီးရက်လည် များများလာကူ”ဟု ဘိန်းစားဥာဏ်
အမှန်စင်စစ် ဒင်းက ဖင်မနိုင် ပဲ ပဲဟင်းစားမိသူပင် ၊ဆင်ခေါင်းကို ဟိုအကောင် ချီထားသလို ဒင်းနင်.ဘလော.၊ ဘလော.နှင်.ဒင်း အိုးနင်းခွက်နင်း ဖြစ်နေသည်မှာ ပိုလီယို ဓါတ်လိုက် ၊ကပ္ပလီကို ခွေးကိုက်ထားသည်.နှယ်ကြည်.
ရသည် မှာရယ်ဖွယ်အလွန်ကောင်း နေသည် ။
ဖြုတ်သာသာ ဦးနှောက် ကလေးနှင်.မတွေးတတ် မရေးတတ်တော.လျှင်အလုပ်မအားသေး အကြောင်းပြချက်
ပေးကာ ၊ထမင်းကျွေးနေသော အလုပ်ကိုပင် ဘလော.ရေးဖို. အချိန်မပေးရကောင်းလား ဟု အပြစ်တင် ကြိမ်း
ဤကဲသို.အူတူတူ ၊ကြောင်တောင်တောင် နှင်. အင်မတိ အင်မတန် ဂွတီးဂွကျ နိုင်လှသူဘလော.နာ မောင်ဖုန်း ဆိုသူအား
မည်ကဲ.သို. ပစ်ဒဏ်ပေး ရင် ကောင်းမလဲဆိုသည်ကတော. ဘလော.လာသူ သူတော်ကောင်း အပေါင်းတို.ဆီက
ပဲ ဆန္ဒခံယူ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ဖို. အကြံပြုတင်ပြအပ် ပါသည် ဘလော.ဂါ အနွယ်ဝင် သူတော်စင် အပေါင်းတို.ခင်ဗျား
(ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး လာဖတ်တဲ.သူတွေ ပျင်းမှာစိုးလို. ရီစရာရေးကြည်.တာ ပေးချင်တဲ. ပစ်ဒဏ်တွေ ကွန်.မန်. မှာရေးခဲ.ကြ နော်)
Posted by phone myint at 5:00 PM6comments: Links to this post
မောင်ဖုန်းမြင်. အသစ်တွေ မတင်နိုင်ရတဲ.အကြာင်း
အခုတစ်လော အလုပ်တွေက ဘာမှန်းမသိလောက်အောင်ကို ရှုပ်နေတာ (ဟဲ ဟဲ ပို.စ်အသစ် မတင်နိုင်သေးရင် ဘလော.ဂါတွေ ပြောနေကြ စကားလေ) တစ်ကယ်ပါ ဗျာ အခုလုပ်နေ တဲ. အလုပ်ထဲမှာတင် ဟိုဘက်ပြေးလိုက်
ဒီဘက်ပြေးလိုက် တော်ကြာဟို ဘက်ပြောင်းလိုက်ရ ဒီဘက်ပြောင်း လိုက် ရနဲ.တစ်ယောက်ထဲကို ပတ်ချာလည်နေတာ အွန်လိုင်းပေါ်တောင် မနည်း ရောက်အောင် တက်ရတယ်။
အရင် မောင်ဖုန်းနေရတဲ. နေရာလေးက အေးအေးဆေးဆေး ပဲ ဘာမှအလုပ်လဲသိပ်မရှုပ်ဘူးကိုယ်ဘာသာကိုယ်
ချောင်လေးထဲ ကုပ်ပြီး တွေးချင်ရာတွေး၊ရေးချင်ရာရေးအေးဆေးပဲတွေးလို.လဲကောင်း၊ရေးလို.လဲကောင်းပေါ.ဗျာ
ဒါကို မရှုစိမ်.တဲ. ကြံက မ္မာက မင်းရုံးခန်း ထဲပြန်လာဆိုပြီး လုပ်ချလိုက်ပါလေရော၊မောင်ဖုန်းရဲ.တည်ငြိမ်အေးချမ်း
နေတဲ.ဘဝ လေးဆွေးသွားတာပေါ. ဒါ.အပြင် အရင်နေရာ က စက်ကလေးကိုလဲ ဖြုတ်သိမ်းလိုက်ရတော. ရေးလက်စလေးတွေ အကုန်ပါသွားရော။
အခုနေရတဲ.နေရာလား ဘယ်လိုကောင်းမှာလဲဗျာ တော်ကြာမန်နေဂျာ တွေလာလိုက၊် ဝန်ထမ်းတွေက ကုန်ပစ္စည်းတွေ မှာကပ်ပြီးရောင်းဖို. ဘားကုဒ်လာထုတ်လိုက် ၊နေ.စဉ်ကုန် အဝယ်စာရင်းတွေ ကို စာရင်းသွင်း
လိုက်နဲ.ယားတဲ.နေရာ ကိုတောင် မှတ်ထားပြီး အားတော.မှ စုကုတ်ရတယ် ။ ဒါတောင် ဘောစိ က ဟောင်ကောင်ဘက် ကို ခရီးထွက်သွားလို. သူရှိနေရင် ပိုဆိုးတယ် ။
အချင်းချင်းတွေ မို.ပြောပြ ရအုံးမယ် ပြန်မပြောရဘူးနော် မောင်ဖုန်းတို. က အင်တာနက်ကို ခိုးသုံးရတာဗျ
မန်နေဂျာ တစ်ယောက်ယောက် သို.မဟုတ် သူဌေး လာပြီဆိုရင် ဘရော.ဇာကို ဖျောက်ဖျောက်ထားရတာ အမော ၊ သူတို. ပေးတဲ.လခ ကိုအလကား ညာယူတယ် ဆိုပြီး အလုပ်ထုတ် လိုက်မှ မောင်ဖုန်းတစ်ယောက် သူများ တိုင်းပြည် မှာ သောင်ပြင်လွတ်တဲ. ဟိုအကောင်လေး ဖြစ်နေ အုံးမယ် ။ အဲ.ဒါကို အလိုက်မသိတဲ. ဟို
ပျုနိုင်ငံတော်က လူကြီးပေါ. မောင်ဖုန်း စီဗုံးထဲ အသစ်မတင်ဘူးလား လို.လာလာ အော်နေတယ် (ဟတ်ဟတ် နောက်တာနော် အကို ) ။
အခုပို.စ်လေးကို တောင်အပြေးအလွား အလုပ်ပါးတုန်းလေး ရေးရတာ ၊ ရေးလိုက် အလုပ်လေးလုပ်လိုက် ဆပ်ပလိုင်းယာ တွေမေးတာဖြေလိုက်နဲ. ကိုယ်ဘာသာတော. ဟုတ်နေတာပဲ ။တစ်နေ. တစ်နေ. လာလိုက်တဲ.
ဆပ်ပလိုင်းယာတွေ ဆိုတာလဲနည်းတာ မဟုတ်ဘူး ၊သူတို.နဲ. နပန်းလုံးနေရတာ နဲ.ရေးဖို.တွေးထားတာလေး
တွေတောင် ဘယ်ချောင်ရောက်ရောက် သွားမှန်းမသိဘူး ၊ ပြောနေရင်း တန်းလန်း မောင်ဖုန်းတို. ဂျာကြီးက
ဘဏ်က လာပို.တဲ.ငွေ အကြွေစေ.တွေကို သူကိုယ် တိုင်ဝင် သယ်နေတော. မောင်ဖုန်းလဲ ဘယ် လိုထိုင် ကြည်.
နေလို.ရတော.မှာလဲ .......ဟူး....ပို.စ်အသစ်လေးတောင် ချွေးတွေ ပေကုန်ပြီ ။
ကဲဒီနေ.တော. မောင်ဖုန်းရဲ. ငိုချင်းရှည် ပို.စ်ကို ဒီလောက်နဲ. ပဲရပ်လိုက်ပါတော.မယ် တော်ကြာဘလော.လာလည် တဲ.သူတွေ စိတ်မခိုင်ပဲ ငိုကုန်ကြရင် မောင်ဖုန်းကြောင်. ဖြစ်နေမှာစိုးလို. ။
(နောက်လလောက် ဆိုရင်တော. အရင်နေရာ ကို ပြန်ရောက်မယ် ထင်ပါရဲ.)
Posted by phone myint at 10:20 AM 1 comment: Links to this post
ဒီခုံတန်းလေးက ဘယ်အချိန်ကာလ ထဲကတည်ရှိနေ သလဲမသိ သေချာသည်က
ကျွန်တော်တို. ဒီတိုက်ခန်းလေး တွေကို ပြောင်းမလာခင် နှစ်ကာလတော်တော် ကြာကြာက ပင် တည်ရှိနေတာဖြစ်မည် ။ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆောက်လုပ်သွားမှန်း
မသိရ ကျနော်တို့တိုက်တန်းလေးရဲ့ အစွန်း အ၀င်အထွက်ပေါက်နားလေးမှာ ဖြစ်သည် ။
ခုံတန်းလေးကို ဘိလပ်မြေနှင်. ပုံသွင်းဆောက်လုပ်ထားပီး အပေါ်ယံမျက် နာပြင်ကို ကြွေပြားကြမ်း လေးတွေကပ်ထား သည် နောက်မှီမပါပါ အရောင်က
ညိုညစ်ညစ် နဲ.ဘယ်လိုမှ ရိုမန်တစ်မဖြစ်ပါ အမြင်.ကတစ်ပေခွဲ နှစ်ပေခန်.သာ သူ.အပေါ်. ထိုင်ချင်လျှင် ရန်ကုန်က လမ်းဘေးဆိုင်လေးတွေမှာ ထိုင်သလို ခြေထောက်ချထိုင်မှ အဆင်ပြေသည် ။
ခုံတန်းလေးမှာ သက်မဲ့ပင်ဖြစ်သော်ငြား တိုက်ခန်းတွဲလေး ၏ ရာဇ၀င် နှင်. ဒီတိုက်ခန်းတွဲလေးမှာ နေထိုင်ခဲ.ဘူးသော လူသားများ၏ ပျော်ရွှင်မှု ၊ ၀မ်းနည်းကြေကွဲမှု၊ လွမ်းဆွတ်တမ်းတမှု တွေကိုမျှဝေခံစားခဲ.ဘူးသည်။
ခုံတန်းလေးရဲ. အစည်ကားဆုံးအချိန်မှာ ခြေခင်းလက်ခင်း သာသောနေ့
များ၏ညနေခင်းများ ပင်ဖြစ်သည် ၊ နေရောင်ခြည်ဖြာသော ညနေခင်းလေပြည်
ညင်းများ ကြား တိုက်တန်းလေးမှ ကလေးငယ်တွေ ပြေးလွားဆော.ကစားနေလျှင် ခုံတန်းလေးမှာ ပျော်ရွှင်ရယ်မောကာ သူ၏အပေါ်တွင် ထိုင်နေသော ကလေးငယ်တို့၏ မိခင်များနှင်အတူ ငေးကြည့်နေတတ်သည် ...။
နံနက်ခင်း ကျောင်းသွားချိန် မှာတော. ခုံတန်းလေးက ကလေးများ၏ ကျောင်းလွယ်အိတ် ၊ထမင်းဗူး များနှင်.တကွ ကလေးငယ်များကိုပါ ချီပိုးရင်း
ကျောင်းကြိုပို့ကား မလာမချင်း စိတ်ရှည် လက်ရှည် စောင်.နေပေးပြန်သည် ။
ဒီခုံတန်းရှည်လေးက မိုးစုတ်စုတ်ချုပ်မှ အလုပ်က ပြန်လာသော ကျနော်တို.
အတွက် စိတ်ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုးများ ပစ်ချပြီး အာရုံများ အညောင်းဆန်. အပန်းဖြေ စရာနေရာလေးလဲ ဖြစ်သည် ။
တခါတရံ ဇာတိမြေကို လွမ်းဆွတ်သည့်ညများမှာ ကျနော်တစ်ယောက်ထဲ
ခုံတန်းရှည်လေးထက် ထိုင်ကာ ညကောင်းကင်ကြီးကို မော.ကြည်.ရင်း
အိမ်လွမ်းသူသီချင်းလေး ညည်းတော. သူက တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်စွာ နားလည်
တိုက်တန်းလေး ရှေ့က လမ်းမထက် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ညဈေးတန်းရှိ
သည်.ရက် ရောက်လျှင် ခုံတန်းလေးမှာ စိတ်ညစ်ညူးရသည် ဈေးသည်
များ ၏ အော်သံ ၊ညှော်သံ ၊မီးစက်သံများ ၊အိတ်ခွံများ၊ဆေးကြောသန့်စင်
ထားသည်.ရေညစ်များဖြင်. ပေပွညစ်ထေးနေတတ်သည် ။
ကျနော်တို.တွေ လူစုံတတ်သည်. လခထုတ်ရက်လို နေ.မျိုး ရီဝေဝေ
ညနေခင်းများ ဝယ်ယူစားသုံးသည်.အခါ ကျနော်တို့နဲ့အတူ ခုံတန်းလေးက စိတ်လှုပ်ရှား တက်ကြွစွာ ယိမ်းထိုးကခုန်တတ်သည်။
ထိုသို.ဖြင်. ခုံတန်းလေးနှင် ကျနော်တို့ရဲ. ဆက်ဆံရေး က နွေးထွေးစွာ
မှတ်မှတ်ရရ ထိုနေ့က ကျနော်တို. ခုံတန်းလေးထက်မှာ ထိုင်နေတုန်း ဆိုင်း
မဆင်.ဗုံမဆင်. မိုးကသဲသဲမဲမဲ ရွာချသဖြင်. ကိုယ်.အခန်းရှိရာသို့ အမြန်ပြေးကြ
ရသည် ။ မိုးက တစ်ညလုံး မတိတ်သည်.အပြင် လျှပ်စီးများလက်ကာ လေကြမ်း
များပင် တိုက်ခတ်လာပါသည် ။
နံနက်ခင်း မိုးစဲ၍ အလုပ်သွားရန် လှေကားမှအဆင်း အမှတ်မထင် ကျနော်.မိတ်ဆွေလေးရှိရာ လှမ်းအကြည်. ကျနော်တို.မိတ်ဆွေ ခုံတန်းရှည်လေးမှာ
အလဲလဲအပြိုပြို ဒါဏ်ရာဗရပွဖြင်. ပြိုလဲကျနေပါသည် ။
ဘယ်လိုများ ဖြစ်ပါလိမ်.ဗျာ........“...ညကမိုးမှောင် ထဲ အမှုက်သိမ်းကား တိုက်သွားတာဗျ ” ....အတူနေအခန်းဖော်ရဲ. စကားသံကို ကြားသိလိုက်ရပါသည်
ထိုနေ.ကကျနော်. မိတ်ဆွေ လေးရဲ့ဈာပန အခမ်းအနားသို. ကျနော် မတက်ရောက်တော.ပါ...............။
Posted by phone myint at 10:52 AM4comments:
်ဟောဒီလို နေ.မျိုးမှာ ပေါ.
အမေ ကျနော်.ကို ဖွားခဲ.တာလေ
ခပ်ပါးပါး မြှားချက်လား အမေ
အခုဆို ကျနော် အတွက်
မျက်ရည်တွေ ဝေနေရပြီပေါ့ အမေ
ကျနော်က မပြောင်းလဲသေးဘူး အမေ
အမေ့ရဲ.ဒုက္ခအိုး လေးပဲပေါ့ .......... ။
၆.၃.၂၀၀၈တွင်ကျရောက်သော ကျနော်.မွေးနေ.အမှတ်တရ ရေးဖွဲ.ပါသည်..။
(ဒီပို.စ်လေးကို windows live writer နဲ.ရေးပီးစမ်းတင်ကြည်.တာ မဆိုးဘူးဗျ အဆင်ပြေသား)
Posted by phone myint at 2:42 PM4comments:
ပုံလေးတစ်ပုံ လောက်လိုချင်လို. မီင်္းလျှံမြေခွေး အကူအညီနဲ. ဟိုရှာဒီရှာ ရှာလိုက်တာ ဒီကာတွန်းလေးတွေ
သွားတွေ.တာပဲဗျာ နှိင်ငံတကာ က ကာတွန်းဆရာ တွေရဲ.လက်ရာစုံ အပြင် IDEA တွေက သဘောကျစရာ
ကောင်းလို. ပြန်လည် ဝေမျှလိုက်ပါတယ် ။
ပညာရေးဆိုတဲ. ခေါင်းစဉ်အောက်က ကာတွန်းလေးတွေပါ..
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်လေးတွေက သူ.နေရာနဲ.သူ ကွက်တိဗျနော်
အပေါင်းအသင်းတို့ ရော ဘယ်ဘာသာရပ် လေ.လာမှာလဲ
ဘွဲ.လက်မှတ် ချီးမြှင်.နေတဲ.စိတ်ကူးလေးရော မကောင်းဘူးလား
ကျောင်းသူလေးက သူ.ကျောင်းအားရက် အတွေ.အကြုံ ကိုရှင်းပြနေတာပါ ။
ကင်းစင်နယ်မြေ လို.ဆိုင်းဘုတ်ထူထား တာတွေအတွက် စဉ်းစားစရာပါ
အင်း သူတို.ဆီမှာလဲ မောင်ဖုန်းတို. ရွှေပြည်ကြီး မှာလိုဘွဲ.ရအလုပ်လက်မဲ.တွေ များတယ်နဲ.တူတယ် ။
ဒီလိုသူနာပြုသင်တန်း တက်ချင် ကြလားဗျာ ၊တကယ်.လက်တွေ.သင်တန်းနော်
ဒါလေးတွေက ကွန်ပြူတာ ဆိုတဲ.ခေါင်းစဉ်အောက်ကပါ
ဒီကာတွန်းဆရာက မောင်ဖုန်းတို. ရွှေပြည်ကြီးမှာ အင်တာနက်သုံးဖူးတယ် နဲ.တူတယ်
ဒီကာတွန်းလေးကတော. ဘလော.ဂါ ကိုိုကို ၊မမတို. အတွက်ပါ...။
ဒီနေ.တော.ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ ၊နောက်ထပ်တခြားသော ခေါင်းစဉ်တွေနှင်. အကြောင်းအရာတွေ ဆက်ရန်ရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာ ။
ဘလော.ဖတ်သူအပေါင်း ကြည်နူး ချမ်းမြေ. ကြပါစေ..။
Posted by phone myint at 2:23 PM No comments: Links to this post
(၀မ်းနည်းကြေကွဲ ရခြင်း ၊ ကိုယ်စိတ် နှလုံး ညိုးနွမ်းရခြင်း တို.သည်
ချစ်ခြင်း သာလျှင် အမွန်အစ ဖြစ်ကုန်၏ ) (ဓမ္မပဒ)
အလွမ်း......ရဲ.ပြဇတ်က အလွမ်း ခန်းဆက် ရှည် ကတယ်....
အလွမ်းမှာ.. အလွမ်းရဲ. သံတူကြောင်းကွဲ မရှိဘူး
အလွမ်း ဟာ... ဇီဝိန်ကြွေတော.မဲ. ငါးလို ဖျတ်ဖျတ်လူးနေတယ်
အလွမ်းဟာ... နက်စ် ကော်ဖီနဲ. စီင်္းကရက် ကြိုက်တယ်
အလွမ်းက....သူ.ကိုယ်သူ အနုပညာစိတ်ရှိသူ လို.ထင်နေတယ်
တခါတရံ..... ဗီသိုဗင် ယောင်ဆောင်တတ်တယ်
မောင်ချောနွယ် ယောင် ဆောင်တတ်တယ်
ပေါ်ဦးသစ်လို.ထင်အောင် ဟန်ဆောင်လာတတ်တယ်............
သူ.ရဲ.အတိုင်း၊ အရှည်ကို မြစ်တစ်စင်းနဲ. ခိုင်းနှိုင်း တတ်တယ်
ထုထည်ကိုတော. သူကိုယ်တိုင်တောင် မမှန်းဆ တတ်ဘူးတဲ.
အလွမ်း က .....
အလွမ်းဟာ လူလား မြောက်လာ ခဲ.တယ်...........။
Posted by phone myint at 9:11 PM3comments: Links to this post